galmudugnews.com » Nairobi: Saddex askari oo qarax ku dhaawacantay Home About
Home » WARARKA » Nairobi: Saddex askari oo qarax ku dhaawacantay Nairobi: Saddex askari oo qarax ku dhaawacantay galmudug on
No Comment Views 16187Inta la ogyahay saddex askari oo uu ku jiro taliyaha saldhigga bilayska Bangani, Boniface Musyoka ayaa ku dhaawacantay laba qarax oo caawo ka dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Goob-jooge Bar-kulan la hadlay ayaa sheegay in qaraxyada oo ka dhashay bambaanooyin gacanta laga tuuray ay kala horreeyeen, kii ugu horreeyayna lagu weeraray baar lagu caweeyo, halka kii labaad lala eegtay ciidamo bilays ah oo gaaray goobta qaraxii hore uu ka dhacay.
Taliyaha bilayska gobolka Nairobi, Moses Nyakwama ayaa oo lahadalay idaacadda maxalliga ah ee Capital FM ayaa xaqiijiyay dhaawaca saddexda askari, kuwaas oo uu sheegay in dhaawacooda uusan halis ahayn.
Bilayska ayaan war dheeraad ah ka soo saarin qaraxyada caawa dhacay.
Goobta ay qaraxyada ka dhaceen waxay u dhowdahay kaniisadda St Polycarp oo bishii hore bam lagu weeraray uu ku dhintay cunug yar, siddeed kalena ay ku dhaawacmeen.
Inta la ogyahay saddex askari oo uu ku jiro taliyaha saldhigga bilayska Bangani, Boniface Musyoka ayaa ku dhaawacantay laba qarax oo caawo ka dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.